Mogadishu Journal » 2018 » August » 27
DF oo AMISOM kala wareegtay Garoonka Muqdisho Stadium (SAWIRRO)
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kormeer ku tagay garoonka Qaranka ee Ciyaaraha (Muqdisho Stadium), ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay bilaabayso qorshe ballaaran oo lagu hawlgalinayo garoonkan. Madaxweynaha...
Taliyaha Nabadsugida Sudan oo soo gaaray Muqdisho
Mjournal :-Taliyaha Nabadsugida iyo Sirdoonka dalka Sudan Gen. Salah Abdalla Mohamed (Salah Gosh) ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. Sida goor dhow lagu shaaciyay barta Twitterka ee NISA ayaa lagu sheegay in Agaasimaha Nabadsugida iyo Sirdoonka Soomaaliya Xuseen Cusmaan...
Mjournal :-Madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cumar ayaa markii ugu horeysay ka shanqariyay barnaamijkiisa waxqabad marka uu soo dhiso golaha wasiiradda. Waxaan kasoo qaadanay 9 qodob oo ka mid ah waxyaabaha uu sheegay in uu qaban doono. 1.Isbadelada Isaga...
Faah-faahin Qarax ka dhacay Muqdisho
Mjournal :-Faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan Qarax maanta ka dhacay Warshadii hore ee Caanaha ee Magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa ahaa Miinadda nooca dhulka lagu Aaso, waxaana la sheegay in lala eegtay gaari Nooca raaxad ah oo maraayay Warshaddii hore ee Caanaha...
Özil oo loo tilmaamay halka waddo ee uu ku ilaashan karo mustaqbalkiisa Arsenal
Waxaa soo if baxday in Macallin Unai Emery uu cadaadis saarayo xiddigga khadka dhexe ee Mesut Ozil, kaasoo aan dabiici u ahayn in kubbadda uu raacdeeyo. Laacibkii hore ee Real Madrid ayaa booskiisa safka koowaad shaki lagaga gelinayaa iyadoo kullankii Gunners ay garaacday West...
Dad lagu toogtay Florida
Mjournal :-Booliska dalka Mareykanka waxaa ay shegeen in nin ka qeyb-galayay tartanka ciyaaraha Komputarka ee magaalada Jacksonville ee gobolka Florida uu toogtay labo qof, afar iyo toban kale uu dhaawacay. Ninka looga shakiyay inuu weerarka geystay oo la rumeesanyahay isna inuu...
Ciidamada ammaanka oo saakay xiray wadooyinka qaar ee Muqdisho
Mjournal :-Wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ayaa saaka xiran, iyadoo gaadiidka ay saaran yihiin dadka shacabka ah aysan isaga kala gudbi karin Isgoysyada Magaalada gudaheeda qaarkood. Isgoyska Jubba, Daljirka, wadada 21-ka October, Ceelgaabta, iyo kuwa kale ayaa xiran,...
Somaliland oo soo bandhigtay ciidan iyo gaadiid dagaal
Mjournal :-Maamulka Somaliland ayaa gobolka Sool ku soo bandhigay ciiidamo iyo gaadiid dagaal oo ka soo goostay Maamulka Puntland, saraakiil ayaa hoggaamineysay ciidanka iyo gaadiidka dagaal ee ka soo baxay Puntland ee ku biiray ciidanka Somaliland. Sarkaalka ciidanka horkacayay...